बिराटनगरमा अनौठो घट्ना : आइसक्रिम र बिस्कुट खाएर होटल छिरेका थिए प्रेमी र प्रेमिका…. « गोर्खाली खबर डटकम
२०७८ भाद्र २५ गते शुक्रवार प्रकाशित
विराटनग । भनिन्छ प्रेम बिना संसार चल्दैन । संसार नै प्रेममा टिकेको हुन्छ । चाहे त्यो प्रेम परिवारप्रतिको होस् या समाजमा नै किन नहोस्, चाहे त्यो प्रेम प्रकृतिसँगको होस् या प्रेमीप्रेमिकाको बीचमा नै किन नहोस् संसार जसरी चले पनि आखिर प्रेममै चलेको हुन्छ ।
प्रेममा विछोड भएपछि युवापुस्ताहरू अनेक ह’र्कत पनि गर्दछन् । धो’कापाएपछि उनीहरू जघन्य अपराधिक कर्ममा पनि लागी पर्दछन् । कतै प्रेमीबाटै प्रेमिकामाथि कर णी, कतै प्रेमीले प्रेमिकाको ह’ ‘त्या गरिन् भन्ने समाचाहरु सुनिने गरेका छन् । युवापुस्ताले प्रेमलाई अ’परा’ध गर्ने प्रमुख ह’ति’या’रको रुपमा लिन थालेका छन् । विराटनगरमा पनि यस्तै एउटा घटना बाहिर आएको छ ।
विराटनगर – १५ रानीस्थित होटल मकालुमा धो’का दिन लागेको भन्दै प्रेमिकाले आफ्नै एक प्रेमिको लिं’ग छे’दन गरिदिएको घटना बाहिर आएको हो । सुनसरीको ब’र्जु गाउँपालिका -२ घर भइ विराटनगरमा डेरी गरि बस्दै आएकी २८ वर्षिय प्रेमिकाले २७ वर्षीय प्रेमिको २७ साउनमा होटलको कोठामा लिं’ ‘ग छे’द’न गरिदिइन् । होटलमा लगेर कर ‘णी गर्न खोजिएको भन्दै ती युवतीले युवकको कै’चीले लिं’ग छे’द’न गरिदिएको प्रहरीले बताएको छ ।
छे’द’न गरिदिने युवती आशा सरदार (नाम परिवर्तन) बर्जुदेखि कामको सिलसिलामा विराटनगर आइन् । उनले एक इन्सुरेन्स कम्पनीमा जागिर पनि पाइन् । कामको सिलसिलामा आशाको सुनिल खवास (नाम परिवर्तन) सँग आजभन्दा वर्षदिन अगाडी परिचय हुन्छ । नेपाल प्रहरीमा जागिर खाएका सनिलको स’म्ब’न्ध आशासँग बढदै जान्छ । मित्रतादेखि सुरू भएको उनीहरूको सम्बन्ध गाढा बन्दै गएपछि प्रेम परिणत हुन्छ ।
सुनिलको घरपरिवारदेखि आउँदो मंसिरमा बिवाह हुने चर्चा चल्छ । मंसिरमा बिवाह गर्ने भएपछि आशासँग प्रेममा रहेका सुनिलले विगत ५/६ महिनादेखि सम्पर्कबिहीन हुन्छन् । सम्पर्कबिहीन भएका सुनिलको मोवाइलमा नयाँ नम्बरबाट साउन २७ गते फोन आउँछ, त्यो फोन थियो आशाको ! एक पटक भेटौं भनेपछि दुवै जनाको सहमतिमा विराटनगर- १५ रानीस्थित होटल मकालुमा भेट हुन्छन् ।
होटल अगाडी भेटभएपछि बाहिर भलाकुसारी गरेर आ’इस’क्रि’म र बिस्कुट खाएपछि मकालु होटलको कोठामा जान्छन् । कोठामा पुगेपछि सुनिलले यौ’ ‘न स’म्प’र्क गर्न खोजेपछि आशाले प्रतिकार गर्दै लिं ‘ग’मा कै’ची च’ला’इ’दिइ’न् । यो घटना २७ साउनको राती ८ बजेको हो ।
प्रेमीले प्रेमिकाले लिं’ग’मा कै’ची च’ला’इ’दि’एपछि घाइते भएका सुनिल (नाम परिवर्तन) तत्काल विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको आकस्मि कक्षमा पुगेका थिए । ‘सेभिङ’ गर्दा यस्तो भयो भन्दै कोशी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेका श्यामको थप उपचारको लागि नोबेल टिचिङ्ग हस्पिटलमा रेफर गरिदिए । नोबेलमा १० टा’चा लगाएपछि उनको लिं’ ‘ग अहिले ठिक हुदै गएको बुझिएको छ । ब्ला’स्टखबर
कंगनाको निशानामा अब बच्चन परिवार: जया बच्चनलाई दिईन् यस्तो सुझाव….